Centre de diagnostic neuropsycho (CDN): ny mararin’ny fanaintainana maharitra no be mitsabo tena | NewsMada
Centre de diagnostic neuropsycho (CDN): ny mararin’ny fanaintainana maharitra no be mitsabo tena
Tao anatin’ny 25 taona niasany eto Madagasikara, nahatratra 4 000 ny isan’ny olona tonga nanatona tao amin’ny Centre de diagnostic neuropsycho.
Toeram-pitsaboana misahana ny fikarakarana ny atidoha sy ny fiasan’ny atidoha ny CDN ary tafiditra ao anatiny koa ny hozatra sy ny lalandra mankany amin’ny atidoha, araka ny fanazavan’ny dokotera Raharison Andrianaina, tomponandraikitra sy mpanangana ny CDN. Zava-dehibe ny famantarana ny anton’ny aretina iray mitranga amin’ny olona tonga manatona ka mampiavaka ny CDN izay. Jerena aloha raha misy aretina ny vatana. Rehefa voamarina fa tsy avy amin’ny vatana ny fototry ny olana, miditra amin’ny fijerena ny saina sy ny fanahy izy. Ilaina koa, matetika, ny fandraisana an-tanana hafa ankoatra ny fampiasana fanafody.
Amin’ny ankapobeny, antony hanatonan’ny olona ny CDN ny fanaintainana maharitra. Mila fantarina ny fiavian’ny fanaintainana ahafahan’ny mpitsabo sy ny marary mahazo fahafaham-po aorian’ny fandraisana an-tanana.
Tsy vitsy koa ny mpampiasa na ny mpitantana orinasa miantso azy hanome fampianarana ny mpiasa ao aminy mikasika lohahevitra manokana hananana fahasalamana amin’ny saina. Misy ny olona sasany mila arahina akaiky ahafahany mandanjalanja ny fifandraisana amin’ny fiarahamonina na ny tenany manokana.
Tetikasa iray sahanin’ny dokotera, ankoatra ny fitsaboana, ny fanabeazana tsy manaraka rafitra Kolo Anaka manampy ny ray aman-dreny amin’ny fibeazana ny zanany. Efa mivoaka an-gazety roa ny famelaberalana lohahevita mifandraika amin’izay fa hisy fandaharana “Kolo Anaka” handeha amin’ny fahitalavi-pirenena TVM, manomboka ny alahady izao amin’ny 2ora latsaka dimy.